Ungayisebenzisa njani into yokupakisha ifilimu yam?
Kukho ikakhulu iintlobo zeebhegi ezi-5, ibhegi ethe tyaba, ibhegi yokuma, ibhegi yegusset esecaleni, ibhegi esezantsi tyaba kunye noluhlu lwefilimu. I-4 yazo ziingxowa ezahlukileyo, eyokugqibela ifilimu enye kuluhlu lonke. Olu hlobo lwebhegi lulungele ukugcwalisa umatshini, ogcina ixesha elininzi kunye neendleko zabasebenzi.Lapha bonisa indlela yokusebenzisa ukupakishwa kwefilimu yam?
Elungiselelweyo ifilimu yeplastiki roll
Izingxobo zokupakisha zihlala zibandakanya ukugqitywa kweebhegi kunye nokupakisha okugqityiweyo. Ukugqitywa kweengxowa zokupakisha ngokubanzi kubhekisa kwiingxowa zokupakisha esele zenziwe kwaye zinokongezwa ngokuthe ngqo kwimveliso, ezinje ngeebhegi ezicaba, iingxowa zokuma, iingxowa zegusset esecaleni, kunye neengxowa ezithe tyaba ezantsi, iingxowa ezitywinwe ngasemva, njl. Izingxobo zokupakisha zibhekisa kwimiqulu yefilimu, engumbhalo wefilimu yeplastiki okanye iphepha lefilimu.
Phantsi kweemeko eziqhelekileyo, ukuba unomatshini wokupakisha, ungawuthenga ngokuthe ngqo umqulu wefilimu, kwaye usebenzise umatshini wokupakisha ukuqhuba uluhlu lwefilimu ukupakisha imveliso. Ngale ndlela, okokuqala, iindleko zoluhlu lwefilimu lusezantsi kunolo lwengxowa egqityiweyo, kwaye okwesibini, ungagcina ukupakishwa kweNdleko zabasebenzi, okwesithathu, inokuphucula ukusebenza ngokupakisha. Ukusetyenziswa kokupakishwa kwefilimu kukhetho olufanelekileyo kwimveliso yokuhamba okuzenzekelayo.
Zimbini iintlobo zoomatshini bokupakisha abasebenzisa izixhobo zokwenza ifilimu. Enye kukusonga umqulu wefilimu ngasekhohlo nasekunene ekupakisheni imveliso, emva koko usike kwaye ubushushu ubutywine iphakheji ngaphambili kunye nesiphelo, enye ke Njengendlela yesiciko sendebe yokugubungela ifilimu ngqo ngaphezulu kwebhotile emva koko ukusika kunye nobushushu itywina. Umahluko phakathi kwezi mveliso zimbini kukuba eyokuqala kukusika kunye nokufudumeza ukutywina umqulu emva kokugoqwa, ngelixa owesibini kukugubungela ngokuthe ngqo ifilimu kwindebe ephezulu kunye nokusika kunye nokutywina kobushushu ngqo.
Kwaye kushicilelo lwefilimu, ngaphandle koyilo loMthengi, kukho izikhombisi ezimnyama kuluhlu lwefilimu, ukuze umatshini wokupakisha uchonge indawo yokuqala kunye nendawo yokuphela kwesiqwenga ngasinye sefilimu oyifunayo yokupakisha.
Inkqubo ye- inkqubo yemvelisoyokuqengqeleka ifilimu nayo ilula ngokuthelekiswa nengxowa egqityiweyo, inkqubo yayo yemveliso ibandakanya kuphela ukushicilela kunye nokugoqa, kungabandakanyi ukusika nokusonga. Okokuqala, sebenzisa imibala eli-9 yesantya esiphezulu somatshini wokuprinta umsebenzi wobugcisa kwifilimu yangaphandle, emva koko ulaminishe ifilimu eprintiweyo yangaphandle kunye nefilimu yangaphakathi yokutya enokuqhagamshelana ngqo nemveliso ngeglu ngomatshini wokulaminetha, kwaye okokugqibela ligumbi lokuxazulula ukuphelisa ivumba kunye nokuqina kweglu ukwenza umboniso wefilimu womelele ngokwaneleyo.
Ngokubanzi, ubude bomsongo wefilimu yi-6000m. Ungabala ukuba zingaphi iimveliso ezigqityiweyo ezinokwenziwa ngumqulu wefilimu ngokobude bemveliso yakho.
Ukucaciswa kwePlastiki yefilimu
Umba Umqulu wefilimu weplastikhi osisiweyo
Izinto eziphathekayo Matt okanye umphezulu ecwebezelayo ngefoyile ye igcwele okanye wena
Ukutyeba 80-150 microns / icala okanye wena
Uphawu Uluhlu lwefilimu
Ukuphathwa komphezulu Ukuprinta kweGravure
Imigaqo yokuhambisa ngenqanawe
Imiqathango eyahlukeneyo yokuhambisa iyafumaneka ngokujonga kubathengi.
Ngokwesiqhelo, ukuba imithwalo ingaphantsi kwe-100kg, cebisa ngenqanawa ngokubonisa njenge-DHL, i-FedEx, i-TNT, njl, phakathi kwe-100kg-500kg, cebisa ngenqanawa ngomoya, ngaphezulu kwe-500kg, cebisa ngenqanawa ngolwandle.
Ngokukodwa sipakisha iingxowa ngeebhokisi zeephepha eziqhelekileyo ezithunyelwa ngaphandle, emva koko sitywinwe ngefilimu yokugoba ubungqina bokufuma.
Egqithileyo Ihowuliseyili icala gusset ibhegi iphepha irayisi
Okulandelayo: China roll iphepha film umboniso
Uqengqelo lwePhepha lwePlastiki oluShelayo
Uluhlu lweFilimu yePlastikhi yokutya
Ifilimu yePlastikhi yokuPakishwa kokutya
Ukupakishwa kwePlastikhi yefilimu
Uluhlu lwePlastiki ePrintiweyo
China roll iphepha film umboniso
China grade ukutya iingxowa iilekese umthengisi
China ibhegi yetshokholethi esemgangathweni